Faah Faahi dheeraad ah Qaraxii caawa Bosaaso Gil Gilay | maakhir.com
Faah Faahi dheeraad ah Qaraxii caawa Bosaaso Gil Gilay
February 5, 2008 in Somalia
Bosaaos:- Qaraxan caawa ka dhacay Dekeda Bosaaso ayaa waxa ka soo baxaya warar is khilaafsan kuwaasi oo qaarkood ay sheegayaan inay dadka weerarka soo qaaday ay ahaayeen kuwa diidan Siyaasada Maamulka Puntland,halka kuwa kale ay daaha ka qaadaayaan inay weerarkaasi log wayn ku leeyihiin dad xidhiidh dhaw la leh Kooxaha Al-Shabaab.
Qaraxan ayaa ka dhacay irada hore ee Dekeda Magaalada Bosaaso,waxana uu ahaa mid si wayn loo soo agaasimay kaasi oo dhacay laba jeer oo si xiga, dhamaan Ciidamada ilaala ka ah Dekeda Bosaaso ayaa markiiba galay difaac xoogan kuwaasi oo rasaas teel teela riday.
Wararkii ugu danbeeyay oo aanu ka helayno Goobaha Caafimadka ee Magaalada Bosaaso ayaa waxay noo xaqiijiyeen in la soo gaadhsiiyay ilaa 50-Ruux oo dhawaac iyo Dhimasha isugu jira,dhakhaatiirta ayaa ka cudurdaartay inaan iminka la kala sooci karin dadka maydka ah iyo dhawaaca maadaama ilaa haadan dadka la soo dada guraynayo.
Ilaa iyo haatan ayaa waxa dhacaysa rasaata waxana ay dadku hor tuman yihiin Goobaha Caafimaadka si ay xog dhab ah uga ogaadaan arintaasi caawa dhacday, Boolis fara badan ayaa la qobay wadooyinka u gudba Dekeda Bosaaso iyo waliba Saldhiga dhexe kuwaasi oo sugaya amaanka Goobahaasi.
Maamulka Gobolka oo aanu la xidhiidhnay ayaa noo sheegay inay wali wadaan badhitaano xoogan oo lagu soo afmeerayo dadkii falkaasi ka danbeeyay, Gudoomiyahha Gobolka ayaa waxa kale oo uu sheegay inay san jirin ilaa haatan cid ay qabteen oo arintaasi log ku leh.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay inay arkeen qiiqa iyo Uura madaw oo cirka isku shereertay goortii uu falkaasi dhacay, waxa jira dadka wax ku noqday qaraxasi inay ka mid yihiin dad Ganacsato ah oo goobahaasi ku aga dhawaa.
Dhamaan Isu socodka Gaadiidka iyo dad waynaha ayaa si taagay Gudaha Magaalada Bosaaso iyada oo goobihiin Ganacsi ee markaasi furaa alaabka laysugu dhuftay si aanay u dhicin Boob iyo Fooda horle.
Qaraxan ayaa ku soo aadaya xili uu Maanta Magaalada Bosaaso ka dhoofay Madaxwaynaha Puntland Cade Muuse kaasi oo la sheegay inuu u sadcaalay dhanka Dalka Itoobiya.
Waa qaraxii sadexaad ee ka dhaca magaalada Bosaaso iyada oo ay ka horooyeen Laba qarax oo kale oo ay dad wax ku noqdeen, Reer Bosaaso oo aan dhegahoodu qarax u baran ayaa arintaasi walaac xoogan ka muujiyay.
« Qarax Xoogan ayaa caawa ka dhacay Gudaha Dekeda Magaalada Bosaaso
Al-Shabaab oo sheegtay inay ka danbaysay Qaraxii Bosaaso ka dhacay »